Metal Lathe Muchina Kutengesa, CNC, Chinyorwa, China Mugadziri & Mutengesi
Universal hwokugaya hwakabvira Machine
CNC Yese Yekugaya Machine
Universal Vertical hwokugaya hwakabvira Machine
Universal Horizontal hwokugaya hwakabvira Machine
Drilling uye hwokugaya hwakabvira Machine
Metal Lathe Muchina
Cnc pombi yekumonera lathe
META KUgadzira MACHINE
Hydraulic Press Muchina
Hydraulic Sheet Metal Sheari Muchina
Chigaro Kufambira Pamusoro Grinder TSA40100
Chigaro Kufambira Pamusoro Grinder TSA2050
Chinyorwa Chepamusoro Grinder M618
Muri pano: Kumba1 / Metal Lathe muchina uri kutengeswa
Kana iwe uchida kugadzirisa iyo bar kana diski mhando simbi workpiece, kuti uwane inopenya yekunze nzvimbo, kugadzirisa tambo kunze kwetenderedzwa bhawa, kugadzirisa mukati memukati gomba, kana kugadzirisa kumugumo kumeso kuti mugumo kumeso kunyangwe, ipapo yedu yesimbi lathe isarudzo yakanaka. Metal Lathes dzinoshandiswa zvakanyanya mukugadzira simbi, kutumira, peturu, mota, kuchera marasha uye mimwe minda.
Kana zvasvika pakusarudzwa kwemuchina we lathe, Zvinonyanya zvichienderana nehurefu, saizi, huremu uye kugadzirisa maitiro eiyo workpiece. Horizontal lathe, vertical lathe inogona kusarudzwa. Kana iri kugadzirwa kwemazhinji, sarudzo funga nezve CNC lathe, asi kana iyo nhamba yekugadzirisa workpiece iri diki kwazvo, saka CNC lathe ingangoita marara, unogona kusarudza chirahwe chebhuku. Yedu lathe mhando yakatsiga, kubva kunobva kutenga kwekutenga mhando, zvakakwana zvirevo. Mibvunzo inogamuchirwa.
Mibvunzo?Tipe isu kufona pa + 86-15318444939, uye taura nemumwe wehunyanzvi reps.Iwe unogona zvakare kuzadza fomu rekutaurirana.
Iyo servo mota kutenderera inodzorwa neiyo CNC system, otomatiki feed, yakakodzera kune batch kugadzira
Vertical lathe muchina
Iyo yekushandira inotenderera yakatwasuka uye mucheki anokwira kumusoro uye pasi. Iyo inokodzera workpiece ine huremu hukuru uye dhayamita
Heavy basa lathe muchina
Lathe chokurukisa kuburikidza mugomba iri rakakura, iyo yekugadzirisa kureba inogona kuve anopfuura gumi metres, inogona kumira uremu hweiyo workpiece kusvika matani akati wandei.
Pipe yekumonera lathe muchina
Inokodzera kurongedza mapaipi akareba uye akakura epamhepo, Iyo yekuzarura yekumusoro zvakare yakakura
Chinyorwa kudzora kwekudya uye kugadzirisa, inokodzera isiri - batch kugadzira
Gap mubhedha lathe
Isa chigaro chinobviswa munzvimbo yemubhedha wechipfuva, Wedzera dhayamita yekutendeuka yeiyo lathe disk mhando
Slant yakaipa lathe muchina
Mubhedha wemubhedha une imwe kona yekurerekera, iri nyore chip kubuda
Wedzera simba musoro uye C akabatana pamusoro lathe kuti azvikuya uye kuchera, zvikuru zvoga
Muchina mudiki wemagetsi
Inokodzera kudiki workpiece kugadzirisa, yakachipa mutengo, Kurema kweiyo workpiece mazana akati wandei makirogiramu
Maererano kudzora muoti, inogona kukamurwa kupinda CNC uye zvavo
Zvinoenderana neAngle yemubhedha, inogona kuganhurwa kune yakatsiga bedstead runyararo bedstead
Maererano nechigaro, inogona kukamurwa kuita chigaro lathe uye zvakajairika lathe
Metal lathe muchina rudzi rweyese simbi yekucheka muchina chishandiso, chinoshandiswa zvakanyanya, chinogona kutenderedzwa kutenderera, gomba, uye kupera.
Kana iko kureba kwemashini kusingakwani, iyo yekushandira inogona kupfuura nepakati pegomba repakati kuti riwedzere machining renji yeiyo lathe. Izvi zvinoda hupamhi hwechokurukisa nepaburi kuti huve hukuru kupfuura hupamhi hwebasa.
Sei ma lathes aine njodzi? Yekuchengetedza bhuku rekushandisa lathe.
Lathes zvakajairika mashini emuchina maturusi, anoshandiswa zvakanyanya mukugadzirisa simbi. Iyo zvakare ine njodzi huru kana iyo lathe ikasashandiswa mushe.
Lathe inorema simbi yekugadzirisa muchina chishandiso, muviri unogadzirwa nesimbi. Kazhinji huremu hunopfuura 1 tani, kana yakakura lathe, huremu hunogona kusvika anopfuura gumi matani. Kana iyo lathe yakamira, zviri nyore kwazvo kukuvara kana mumwe munhu ari pedyo netsaona akawira akabata lathe.
Kana iyo lathe ikatanga kumhanya, iyo yekumhanyisa-inotenderera inotenderera inotya iyo workpiece kutenderera, kana iyo chuck tsaona, ipapo nzwara inobhururuka ichibuda, zviri nyore kutungamira kukuvara kwakakomba, isingasviki pane tsaona yemotokari. Kana vhudzi refu remunhu, maoko, kana asina kurongeka zvakanaka, zvakare zvakare nyore kupinda mune muchina.
Iko magetsi anoshandiswa neiyo lathe kazhinji magetsi emagetsi, kana paine tsaona yemagetsi yekudonha, kune njodzi yekuvhunduka kwemagetsi.
1 inofanirwa kuziva mashandisiro e lathe, kana ari novice, anofanirwa kuve neruzivo mukushanda kwevashandi padivi pekutungamira, zvikasadaro hazvibvumirwe kushandisa lathe.
2 teerera kupfeka, inofanirwa kusimbisa cuff, zvipfeko hazvibvumidzwe kuve nechero tambo, kana bhandi remachira rakarembera. Hapana magirovhosi, hapana mhete uye hapana mawachi. Pfekai vadziviriri vemaziso kazhinji.
1 magetsi, inofanirwa kuona kuti hapana leakage yemagetsi, iyo tambo yepasi yakanyatsodzika pasi
2 Chikamu chega chega chekuzora chinofanira kuve nemafuta
3 Iyo lathe inofanira kumira kumhanya kana uchiburitsa iyo workpiece kana kutarisa iko kwechokwadi kweiyo workpiece
4 hen iyo lathe iri kumhanya, vashandi vanofanirwa kuchengeta imwe nhambwe kubva kune iyo lathe
5 Kana akati wandei mativi ari padivi nedivi, tenderera pane imwe Angle
6 Usashandise maoko ako kuchenesa mafirita esimbi
7 usati waita lathe basa, ita shuwa kuti iyo chuck yakavharwa, ita shuwa kuti iyo yekushandira yakamanikana
8 Usati waisa uye kuburitsa lathe inorema, chidimbu chehuni chinofanira kuiswa pakati pebasa rekushandira pamwe nechitima chinotungamira kudzivirira iro rebasa kuti riwire netsaona
Ndeupi musiyano uripo pakati cnc lathe muchina uye manyore lathe muchina?
Musiyano mukuru pakati pezviviri uri munzira yavanodzorwa nayo.
Iyo yekudzora maitiro eCCC lathe: CNC system - controller - servo mota
Anoshanda anofanirwa kucheka chirongwa achishandisa G kodhi chirongwa, chakatumirwa mukati meCNC system yeiyo lathe, iyo lathe ichaona otomatiki kugadzirisa kweiyo workpiece, isati yapera, hapana yekushandisa kupindira zvakare.
Kudzora maitiro eakajairwa lathe: inoda mashandiro mashandiro, haigone kuve yakarongedzwa kutonga, zvimwe hazvigone kuiswa.
Iwe unofanirwa kupfeka magurovhosi kana uchishandisa lathe?
Zvine ngozi zvikuru.
Kwete chete haugone kupfeka magurovhosi, bhutsu kupfeka rakasimba basa mbatya, cuffs bhurugwa, bvudzi refu kupfeka inodzivirira cap, usapfeka magurovhosi, kucheka workpiece uye kurodza vanofanira kupfeka magirazi.
Kana iwe uri kushanda yakajairika lathe, pane zvinotevera zvikonzero:
Iyo lathe haina kunyatso kuvharwa, uye vashandi vari padhuze nebasa.
Shandura ruoko rwevhiri nemaoko kazhinji,
3 manikidza kusunungura kana kukiya iyo chuck
Iyo lathe inovimba nemagetsi-emagetsi mota kutyaira chokurukisa kutenderera nekumhanya kukuru uye kushanda nemagurovhosi, saka zviri nyore kwazvo kubatirirwa kana kusungwa nemuchina.
Nzira yekusarudza chakakodzera chishandiso che lathe
Zvinhu zvinotevera zvinofanirwa kutariswa pakusarudza chimbo chekushandisa:
(1) Zvichienderera mberi kugadzira nzvimbo dzakawanda sezvinobvira panguva imwe chete;
(2) Mukucheka maitiro, chishandiso hachigone kupindira neiyo workpiece contour;
(3) Inogona kuvandudza mashandiro ekugadzirisa uye mhando yepamusoro;
(4) Inonzwisisika chishandiso simba uye kusimba.
1. Rudzi rwekushandura chishandiso
CNC lathe inowanzo shandisa standard clamp indexable chishandiso. Iyo banga nemuviri wechigadzirwa zvinonzwisisika zvine zviyero. Nereza zvinhu zviri cemented carbide, zvemapuranga cemented carbide uye kumhanya simbi.
Zvinoenderana nemabasa akasiyana, inogona kukamurwa kuita cylindrical cutter, yekunze tambo yekucheka, yemukati tambo yekucheka, kucheka mucheka, gomba kugadzira aricheke (kusanganisira yepakati gomba chibooreso, inofinha mucheki, pombi, nezvimwewo.
Kana iyo indexable chishandiso ichishandiswa kugadzirisa iyo isiri regrinding blade, inowanzo gashira iyo block dhizaini ye screw, screw yekutsikirira ndiro, screw pini kana wedge.
2. Sarudza blade zvinhu
Kune maviri marudzi ezvishandiso anowanzo shandiswa kutendeudza kumhanya simbi nesimbi carbide.
Yekumhanyisa simbi simbi inowanzo kuve isina chinhu, kuomarara kwayo kuri nani pane yakaomeswa carbide, uye kuomarara kwayo, kupfeka kuramba uye kuomarara kutsvuku kwakashata kupfuura simende carbide. Izvo hazvina kukodzera kucheka zvinhu zvine yakakwira kuomarara uye kumhanya kucheka. Yekumhanyisa simbi yekucheka maturusi inoda kurodzwa nemugadziri usati washandisa, uye kurodza kuri nyore, iyo inokodzera mhando dzese dzisiri-dzakajairika maturusi ekushandisa ane zvakakosha zvinodiwa.
Cemented carbide inoisa ine yakanakisa yekucheka mashandiro uye anoshandiswa zvakanyanya muNC kutendeuka. Cemented carbide inoisa ine yakajairwa maratidziro akateedzana, uye iwo akasarudzika matekiniki parameter uye yekucheka mashandiro zvinopihwa nemugadziri wezvishandiso.
Zvinoenderana neyakajairwa nyika dzepasi rose (ISO), simende carbide inoiswa yakakamurwa muzvikamu zvitatu: p-simbi, m-simbi isina chinhu uye k-yakakandwa simbi zvinoenderana neukukutu uye kukotama kwesimba kwesamende carbide. Iwo manhamba e01, 05, 10, 20, 30, 40 uye 50 anowedzerwa mushure memakodhi eK, P uye m ekugovera zvikamu. Kazhinji, diki iyo nhamba iri, iko kukwirira kuomarara kuri, asi kuderera kuomarara kuri; ukuwo, iyo yakakura nhamba iri, iko kukwirira kuomarara kuri, asi kudzikira kuomarara kuri.
Uye zvakare, kune zvishandiso zvemidziyo neukukutu uye kupfeka kuramba kupfuura cemented carbide, senge maceramics, cubic boron nitride nedhaimani.
Lathe muchina wekugadzirisa uye kugadzirisa
Paunenge uchishandisa iyo lathe muchina, unotevera kuraira unofanirwa kucherechedzwa:
1) Iyo lever yemafuta mumatangi ese emafuta anofanirwa kugara achigadziriswa pakati peiyo gaji yemafuta; kana zvisina kudaro kungave kusashanda kwekuzora kana kupisa zvakanyanya nekurasikirwa musimba kuchaitika.
2) Mapoinzi ese ekuzora mafuta anofanirwa kuvezwa nemafuta akachena nguva nenguva.
3) Kazhinji tarisa kuyerera kwemafuta kuburikidza nekuona girazi uchiona kunyatso gadzira musoro wemusoro uye chikafu chebhokisi.
4) Tarisa uye gadzirisa kukakavara kwemabhandi emota nguva nenguva.
5) Usati waitwa mashandiro ezuva nezuva, mhanyisa mainini idle kweminiti imwe, uye wozoshanda mativi ese echechi isina mutoro, zadza mafuta mubhati remafuta echigaro.
6) Nechokurukisa chinomhanya nekumhanya, kamwe kamwe shanduko yeiyo id id haina kubvumidzwa.
7) Iyo leadscrew inoshandiswa tambo chete. Usambofa wakashandisa kushandura mashandiro.
8) Paunenge uchizorora wakadzikama kana muteveri zororo, kusangana pamusoro pekuzorora kunofanirwa kuvezwa.
1). Chokurukisa kuchinja
Kuwedzeredza kubvumidzwa mukutakura kwekukonzera kunokonzeresa "kushanda kupedzisa kusatsetseka" Iyo chaiyo yekuruka inotenderera inosanganisira radial run-out uye axial run-out. Radial run-out inovimbiswa nekaviri mutsara roller yakatakura pamberi pechigadziko uye imwechete mutsara radial kukanda bhora rinotakura kumberi kwesimbi apo axial kumhanya-kunze kunovimbiswa ne imwechete mutsara kukanda bhora rinotakura kumberi kwesimbi. Tarisa nzira inoenderana nechinhu 5 uye 8 mune test test. Kana iko kurongeka kusiri kune izvo zvinobvunzwa, kazhinji. Maitiro ndeaya anotevera: chinja iyo nati pane chokurukisa kubvisa clearance mu chokurukisa inobereka.Uye kiya imwe nati mushure mekugadzirisa. Kana iyo radial run-out isiri kumusoro kune izvo zvinobvunzwa asi gadzirisa kumashure kutakura neimwe nzira ad shambadziro yakatsanangurwa pamusoro. Mushure mekugadziriswa kwaitwa, mhanya chokurukisa idle nekumhanyisa kweawa uye cherekedza kuti tembiricha inotakura haifanire kupfuura 70 ℃. Kana ikapfuura, tanga kusunungura sikuruu pane yakatarwa nzungu, ipapo nzungu dzinofanira kusunungurwa zvishoma, mushure mekugadzirisa, dzosera zvakare masikuru.
2）. Chain Wheel Kugadziridza
Iko shanduko yekumhanyisa spindle inodzorwa ne levers pamberi pechitsiko chemusoro. Kudzora levers kunogona kusudurudza slide magiya kuburikidza neketani vhiri mashandiro kuwana akasiyana magiya mamiriro. Kana iyo chaiyo spindle kumhanya isina kuenzana neiyo hama yekumhanyisa iri kutemerwa pane yekumhanyisa kumhanya inoratidza kufona kunofanirwa kuita kugadzirisa kwecheni vhiri michina. Kutanga sunungura sikuruu, shandura eccentric mugodhi gadzira cheni kusvikira chokurukisa kumhanya chinja pointer yakaiswa kune chaunoda chinzvimbo, ipapo, sungisa iyo screw kuti uwane iyo shaft kuburikidza nesimbi mabhora.
3). Chekugadzirisa Kugadzirisa
Kuchenesa pakati pemuchinjikwa wesiraidhi uye nzira dzinofamba uye izvo pakati pemakomponi ekuzorora kwemasiraidhi uye nzira dzinofambiswa dzinogadziriswa nemabhosi kuburikidza nesikuru zvakateerana. Muchokwadi chekudzoka kwemuchinjikwa mutobvu mutobvu unokonzerwa nekupfeka kwenzungu dzinogadziriswa, sunungura sikuruu pamanzungu uye dhonza wedheji nesikuru kusvikira iyo yekumusana yabviswa. Wobva wasunga sikuru.
4). Mota Bhandi Kukakavara Kugadziridza
Iyo huru yekutyaira mota yakasungirirwa mugumbo re lathe. Bvisa chifukidziro pamberi pegumbo remakumbo, kukakavara kwebhanhire kunogona kugadziriswa nekushandura mafungiro epaseji yemota kuburikidza nenzungu. Kusunga kwebhanhire remota kunoenderana nedaro riri pakati pepakati pemota pulley neiyo pulley yemusoro wemusoro.
Lathe muchina wakajairika kukanganisa kuongororwa, uye nzira dzekurapa
Aihwa Kumisa Zvikonzero Kuchenesa Maitiro
1 Simba harigone
Shanduko yekufambisa haigone kubatika Vhura musuwo wekukanganisa sikuru pane switch, fambisa switch iripanze zvakakodzera, wozodzosera screw yacho
2 Chokurukisa injini havagoni kumhanya Shanduko yekufambisa haisi kushandiswa Vhura musuwo wekukanganisa sikuru pane switch, fambisa switch iripanze zvakakodzera, wozodzosera screw yacho
3 Kudzora transformer kunopiswa Simba remagetsi mushandisi harisi maererano nemagetsi akapiwa. 1. Zvinoenderana nebasa, chinja girobhu racho ne ”24v, 40w” rimwe
2.Dzorera chinja iwe pachako.
4 Mubato uri pamusoro wemusoro haugone
Kutamiswa, saka kumhanya kunogona
1.Chigadziro chakamiswa chinochinja
2. Iyo yakamira puranga inochinjika.
1. Bvisa ndiro yakatenderera nechibato, uye sungisa sikuru yakamiswa.
2. Sungisa zvese screws padanda.
5 Kana chokurukisa chinomhanya mune yakaderera kumhanya, haigone kuchinja kumhanya Iyo nati pane eccentric shaft, iyo yakasungirirwa mune yekutsvedza inotsvedza, inochinja. Vhura chifukidziro chepamusoro chemusoro wemusoro tenderera iyo eccentric shaft imwe isina kuroorwa, uye utumire mubato kune kumhanya kwazvo, kumhanya kwakadzika kana chinzvimbo chisina chinhu .Kana masango emagetsi anogona kuita zvakajairika, kiya iyo nati.
6 Chokurukisa mumusoro wemusoro chinotanga zvishoma nezvishoma Iko kupesana kwekukweshera discs pane shaft ini mumusoro wemusoro wakakura. Mushure mekugadzirisa kukakavara discs, simudza chokurukisa kudzora levers kuti uzviedze kusvikira chokurukisa chiri mune zvakafanana mamiriro.
7 Iyo lathe inodedera kana ichirovera kana kuomarara kweiri workpiece hakusi kusvika kuchinodiwa. 1. Kugadziriswa kwesimbi yekumonera uye yekutakura hakusi iko.
2. Reak kana clearance angle yakanyanya kukura.
3. Chinyorwa chechigadzirwa hachisi chokwadi.
4. Simba re shank harina kukwana. Kana iyo cantilever yakarebesa.
5. Kufambidzana pakati peswidhi slide uye chigaro hakuna kumira zvakanaka.
1. Sarudza zvakakodzera mabheyaringi pane chokurukisa uye maviri epamberi mahwendefa
2. Kukuya chishandiso zvinoenderana nezvinodiwa.
3. Sarudza yakakodzera machira echishandiso zvinoenderana nezvinhu zvebasa.
4. Inogadzirisa iyo cantilever kureba shand.
5. Bvisa swivel slide.
8 Iyo taper chiyero chebasa-chidimbu chiri kunze kwechinodikanwa kana muchina uchishandurwa kutenderera kunze kwekunze pamusoro. Kuiswa kwemuchina hakusi yakatwasuka Ruramisa iyo lathe zvinoenderana neOperation bhuku.
9 Iyo lathe haigone kufudza otomatiki. 1. Left & kurudyi tambo shanduko lever haina kushandiswa nemazvo.
2. Iwo magiya anotenderera anoenda.
1. Tarisa lever. Kana iri kurudyi, muchina unogona kufudza zvakajairika, kana uri kuruboshwe, muchina haugone kufudza.
2. Iyo nati pane swing furemu inochinja. kuitira kuti magiya anotenderera abve. Ruramisa magiya sungisa nati pane swing furemu.
10 Apron haigoni kufamba nekukurumidza 1. Iyo fuse yakatsva.
2. Bhatani harigone kubata.
2. Vhura mubato wepamusoro-wekumhanyisa uye dhonza bhatani: gadziridza mhangura mbiri nenzvimbo dzekubata. Panguva imwecheteyo, tinya mapoinzi, dzosera bhatani.
11 Ruzha rwakakwira kana muchina uchimhanya. Mabheyari aparadzwa. 1. Kana ruzha rwe shaft ini rwakakwira mushure mekunge mota yatanga, iyo inobata pane shaft ini yaparara.
2. Kana uchisimudza mubato wekumhanyisa kumhanya chokurukisa, ruzha rwacho rwakareba, kana uchisimudza mubato kuti umise chokurukisa, asi rega mimwe miseve imhanye, ruzha ruri pasi. Izvi zvinoratidza kuti kutakura pane chokurukisa kwakaparadzwa.
12 Chinhu chinofanira kucherechedzwa kana uchiisa iyo lathe. 1. Mota dzinomhanya munzira imwechete mushure mekubatanidza waya. Usachinje chikamu chechikamu pane chero mota imwechete nemaune.
2. Unofanirwa kubvarura pepa remafuta chisimbiso uye nekuchenesa zvakanaka mushure mekunge muchina waiswa.
3. Girisi yemafuta yemafuta ine 20 # munguva yechando kana 30 # muzhizha .Usaitsiva nemafuta ekuzodza anoshandiswa mumota kana hydraulic mafuta.
Ndapota siya munda uyu usina chinhu.
Injini Lathe Machine
Horizontal Metal Kucheka Band Vakaona
100+ Vashandi vane hunyanzvi.
15+ Makore ezviitiko
Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezve CNC Machining
Ndeapi magonhi ekuchengetedza akagadzirwa?
Mashandisiro Ekushandisa Metal Lathe: Gap Bed Lathe Machine Mashandiro
Chii chinonzi Metal Lathe Machine? Shandisa, Tsananguro, Mashandiro, Zvikamu, Dhayagiramu
Lathe Machine Nhanganyaya: 16 Mhando dzeLathe Machine
Muchina Turu China Mutengesi
Runhare: + 86-15318444939
Runhare: + 86-632-5656658
7 * 24 Maawa
Kwete 6 Industrial Area Park, Dadi Road, Tengzhou, Shandong, China
Copyright 2010-2030 © Shandong Tsinfa CNC Zvishandiso Co., Ltd.